Distrikan’I Brickaville “Ny kaominin’I Ranomafana irery no manana fiara mpitondra marary.”
Napetraka tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny toerany ny faran’ny herinandro teo ireo ben’ny tanàna miisa 18 lany tao amin’ny distrikan’i Brickaville.
Ho an’ny kaominin’i Ranomafana manokana dia efa mipetrapetraka ny fampandrosoana, hoy ny ben’ny tanàna ao an-toerana, Barthelemy Samuel Ravelonanosy, indrindra, ny lafiny fizahantany. Mampiavaka azy ny fananany ny Ranomafana izay tsy hananan’ny kaominina hafa ao Brickaville. Ny sekoly, ny biraon’ny kaominina, ny biraom-pokontany, ny tsena, ny lalana dia efa hipetrahana ezaka avokoa. Manana ny fiara ataon’ny vahoaka fitondrana marary na « ambulance » i Ranomafana ary mampiavaka azy sy reharehany amin’ireo kaominina hafa ao Brickaville koa io satria mitaona sy mitatitra ireo olona na marary na saro-piterahana hoentina any Vatomandry na Toamasina na Moramanga. Misy ny fanarenana hatao amin’ny fitantanana tsy mety taloha ary hohafainganina izay fampandrosoana izay, hoy izy. Hasongadina ny fiaraha-mitantana amin’ny vahoaka izay hipetrahan’ny teny ierana sy mangarahara tanteraka. Olana ho an’ity kaominina ity ny mikasika ny fambolena manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro. Vahaolana natolotra ho an’ireo tantsaha ny tsy fiononana amin’ny teknika mahazatra fa fijerena ihany koa ny voly sy teknika mifanaraka amin’izay toetr’andro izay. Miara-miasa amina teknisianina mijery izany ny kaominina. Maro koa ny olana amin’ny fiompiana. Eo amin’ny fiompiana omby, ohatra, dia tsy zatra manao vaksiny ireo omby ny mpiompy. Misy noho izany, hoy izy, ny ezaka ataon’ny kaominina mba hizarana vaksiny maimaimpoana.